အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်းတွင် အိုင်အက်စ် စစ်သွေးကြွ ၁၀၀ ခန့် လက်နက်ချ - Xinhua News Agency
ဂျလာလာဘတ်၊ အာဖဂန်နစ္စတန်၊ နိုဝင်ဘာ ၂၄ ရက် (ဆင်ဟွာ)
အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်း နာဂါဟာပြည်နယ်တွင် အိုင်အက်စ်အဖွဲ့နှင့် ဆက်စပ်သော စစ်သွေးကြွ ၁၀၀ ခန့်သည် နိုဝင်ဘာ ၂၃ ရက်က လက်နက်ချခဲ့ကြောင်း ဒေသခံတာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက အတည်ပြုပြောကြားခဲ့သည်။“Daesh သို့မဟုတ် အိုင်အက်စ် စစ်သွေးကြွ ၁၀၀ ခန့်ဟာ နိုဝင်ဘာ ၂၃ ရက် နံနက်ပိုင်းမှာ ပြည်နယ်မြို့တော် ဂျလာလာဘတ်ရှိ နာဂါဟာ ထောက်လှမ်းရေးဆိုင်ရာအထွေထွေညွှန်ကြားမှုဌာန (GDI) တာဝန်ရှိသူတွေထံမှာ လက်နက်ချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်” ဟု နာဂါဟာ GDI ရုံး ညွှန်ကြားရေးမှူး Mohammad Bashir က သတင်းထောက်များအား ပြောကြားခဲ့သည်။
အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံ နာဂါဟာပြည်နယ် မြို့တော် ဂျလာလာဘတ်တွင် နိုဝင်ဘာ ၂၃ ရက်က ပြုလုပ်သော လက်နက်ချအခမ်းအနားသို့ အိုင်အက်စ် မိတ်ဖက် စစ်သွေးကြွများ တက်ရောက်လာစဉ် (ဆင်ဟွာ)
လက်နက်ချခဲ့သော စစ်သွေးကြွများသည် Muhmand Dara ၊ Chaparhar ၊ Kot နှင့် Khogiani ခရိုင်များ၌ လှုပ်ရှားနေကြသူများဖြစ်ကြောင်း Bashir က ဆိုသည်။
စစ်သွေးကြွဟောင်းများ၏ လက်နက်ချခြင်းနှင့်အတူ တောတောင်ထူထပ်သော အဆိုပါပြည်နယ်၌ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် တည်ငြိမ်ရေး ပိုမိုအားကောင်းလာမည်ဖြစ်ကြောင်း တာဝန်ရှိသူ ပြောခဲ့သည်။
လက်နက်ချလာသော စစ်သွေးကြွများက ၎င်းတို့၏ အိုင်အက်စ်အဖွဲ့ဝင်များကိုလည်း လက်နက်ချကြရန် ပြောကြားခဲ့ကြသည်။
မကြာသေးမီလများက နာဂါဟာပြည်နယ်တွင် တိုက်ခိုက်မှု အများအပြား လုပ်ဆောင်ခဲ့သော အိုင်အက်စ်အုပ်စုကမူ ၎င်းသတင်းနှင့်ပတ်သက်၍ မှတ်ချက်ပေးထားခြင်းမရှိကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
Source: Xinhua| 2021-11-23 17:05:33|Editor: huaxia
JALALABAD, Afghanistan, Nov. 23 (Xinhua) — About 100 Islamic State (IS)-affiliated militants surrendered in Afghanistan’s eastern province of Nangarhar on Tuesday,alocal official confirmed.
“Some 100 Daesh or IS militants surrendered to officials of Nangarhar General Directorate of Intelligence (GDI) in provincial capital Jalalabad city Tuesday morning,” Mohammad Bashir, director of Nangarhar GDI office, told reporters.
The militants who surrendered were active in Muhmand Dara, Chaparhar, Kot and Khogiani districts, according to Bashir.
With the former insurgents’ surrender, peace and stability would be further strengthened in the mountainous province, the official said.
The surrendered militants called on fellow IS members to lay down their arms.
The IS group, which has staged several attacks in Nangarhar in recent months, has yet to make comments on the report. Enditem
Photo : 1, 2- Islamic State (IS)-affiliated militants attendasurrender ceremony in Jalalabad, capital of Nangarhar province, Afghanistan, Nov. 23, 2021. About 100 Islamic State (IS)-affiliated militants surrendered in Afghanistan’s eastern province of Nangarhar on Tuesday,alocal official confirmed. (Photo by Hamidullah/Xinhua)